PressReader - Ilanga: 2018-11-29 - Yenza okuningi i-mayonnaise
Yenza okuningi i-mayonnaise
IKHAYA elingenayo i- mayonnaise lisuke lingaphelele njengoba kamuva lesi sinongo singasagcini ngokuba ngesasekhishini kuphela kodwa sesisebenza ngisho emzimbeni ngisho ezinweleni imbala ngenxa yezithako zayo ezinempilo nomsoco. Ziningi izindlela ongasebenzisa ngazo lesi sinongo kuneyejwayelekile yokwenza kunambitheke kahle ama- salad ne-chicken mayo sandwich.
Uma uyifaka ekudleni inika ukudla kwakho ukunambitheka okumuncwana okuvula inhliziyo kanti uma uyisebenzisa ezinweleni inika izinwele zakho impilo, zibukeke zigcwele. Kayigcini lapho ngoba uma uyisebenzisa esikhunjeni njengemask, isishiya sibushelelezi, ibulale nesikhumba esidala. Okuhle ngayo wukuthi uma uyisebenzisa emakhekheni kunokusebenzisa amaqanda wukuthi kayishiyi iphunga elingase liphazamise ukunambitheka kwezinye izithako. Ungaphinde futhi uyisebenzise njenge- icing uma wenza ama- muffin noma ama- cupcake. Uma uyisebenzisa esikhundleni samaqanda kungamele usebenzise izipuni ezintathu ukulinganisa nesikalo seqanda ngalinye. Kayikho into ecoba njengenyama enamathela epanini. Kuba nzima kakhuluke uma usebenzisa i- grill yamalahle. Ukuze ungaphathwa yikhanda, gcoba inyama ozoyipheka nge- mayonnaise. Kuyafana noma wenza i- cheese sandwich toast, gcoba ingaphandle lesinkwa ngayo, uzozizwela nawe. Yinhle ngoba ithakwe ngamafutha nokusa- acid, okuyizithako ezihamba phambili uma kukhulunywa ngama- marinade. Okwakho sekungaba wukufaka ama- herb, u- garlic namanye ama- spice owakhonzile. Uma ukhonze i- mash noma i- spinach esishelela ngokusakhilimu, ungayishiyi ngaphandle i- mayonnaise. Uzobezwa becela impinda. Phumuza i- margarine nebhotela kuma- sandwich akho ngokusebenzisa i- creamy mayonnaise engekho muncu kakhulu. Ngabe uthanda ama- chips namacrudite? Lezi zidlo zinambitheka kamnandi uma zizogcobhozwa kwidip, nakhona ungayisebenzisa.
NAZI EZINYE IZINDLELA ONGAYISEBENZISA NGAZO EMZIMBENI Njengoba inothe ngamaqanda namafutha, iwukudla okunempilo kwesikhumba iphinde ivuselele nesikhumba esidala. Uma ufuna ukuyisebenzisa njenge- mask, yigcobise esikhunjeni bese ulinda imizuzu engu-10 ngaphambi kokuyigeza. Uzosala nesikhumba esintofontofo njengesosana. Uma unezinwele ezinenkani zibhixe ngayo bese ulinda ihora ngaphambi kokuzigeza. Lokhu ungakwenza njalo kanye evi
kini zize zijwayele. Uma unesikhumba esizwelayo, yigcobise kuleyo ndawo ukuze kudambe ukuzwela. Kanjalo futhi uma ubuselangeni isikhathi eside, yigcobe ukuze upholise isikhumba. Yibhixe kulezo zindawo ezihhadlazelayo njengamadolo nendololwane. Yiyeke imizuzu engu-10 kuya kwengu-15. Phindaphinda lokhu isikhumba size sijwayele. Uma uhlushwa yizinzipho ezisheshe zinqamuke, gcoba izandla zakho ngayo, enye uyihlikihle khona ezinzisheni bese ugeza ngamanzi antukuntuku. Iphinde ishiye izandla zakho zintofontofo. Ngaphambi kokuba uqale ukuyisebenzisa qikelela ukuthi umzimba wakho awuzweli ezithakweni ezisetshenziswa uma yenziwa njengamaqanda. Uma ubona ukuthi isikhumba sakho siyezwela, yigeze masinya ngamanzi apholile ungabe usayisebenzisa.
I-MAYONNAISE yenza amakhekhe abe ntofontofo iphinde ibe yi-marinade. UMSOCO we- usilungele isikhumba.